Jeneraly Ramakavelo Désiré : “Fahatahorana kandidà amin’ny fifidianana ny fanitsiana lalàmpanorenana” | NewsMada
Jeneraly Ramakavelo Désiré : “Fahatahorana kandidà amin’ny fifidianana ny fanitsiana lalàmpanorenana”
Tsy mbola vita ny adihevitra momba ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Maneho ny fijeriny ny mpandalina tantara sady minisitry ny Fiarovam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Ramakavelo Désiré: “Kajikajy politika avo lenta io: tsy hidiran’ny roa atahorana, angamba, matoa sakanana ny fahazoany mirotsa-kofidina.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fahitanao ny fikasan’ny mpitondra hanitsy lalàmpanorenana?
– Tsy mety… Raha hitan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao fa tsy araka ny tokony ho izy io, efa hatramin’ny ela io no nangatahiny hovana. Tena kajikajy politika avo lenta io. Efa akaiky fifidianana izao, samy mihetsiketsika avokoa ireo mpanao politika sy ireo te hirotsa-kofidina. Inona ny hatao mba tsy hahatafiditra an’ireo? Hasiana fanitsiana ny lalàmpanorenana.
Voalohany amin’izany, amin’ny taona hoe tanora loatra ny 35 taona fa hatao 45 taona. Efa miala aloha izany ny iray. Manaraka, tsy tokony hahazo mirotsa-kofidina izay efa voaheloka tamin’ny fitsarana na teto an-toerana na tany ivelany. Miala indray izay ny faharoa. Izay ilay kajikajy politika avo lenta: tsy hidiran’ny roa atahorana, angamba, matoa sakanana ny fahazoany mirotsa-kofidina.
Tsy mahagaga koa eto amintsika: 57 taona izao no niverenan’ny Fahaleovantena, efa impiry niova ny lalàmpanorenana? Miova raha vao asiana fanitsiana fotsiny… Efa atao ny kajy tsotra indrindra: miova isaky ny dimy taona ny lalàmpanorenana malagasy. Inona ny antony? Atao toy ny akanjo araka ny refin’ny filoha eo.
Marina ny fijerin’ny mpanao politika sasany hoe hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka ilay izy; avy eo, lazaina fa tsy misy vola hanaovana fifidianana. Amin’izay, mihemotra ho azy ny fifidianana filoham-pirenena. Eo ihany izy…
Manaraka, raha mbola tazonina ny lalàmpanorenana: roa volana alohan’ny firotsahan-kofidina, tsy maintsy mametra-pialana ny filoha am-perinasa. Amin’izao efa fifandroritana politika izao, ho tafaverina eo ny filoha miala roa volana mialoha izany?
* Tena tokony hovaina sa tsia ny lalàmpanorenana?
– Na ovaina impolo na injato io, nefa tsy mifanaraka amin’ny kolontsaina sy ny kolom-piarahamonina malagasy fototra, fa petapeta-toko alaina avy atsy sy avy aroa: mitovy hatrany… Tokony hahitana ny hoe foto-pisainana malagasy ny lalàmpanorenana, ny vinam-piarahamonina malagasy.
Efa manana ny hoe fokonolona, ohatra, isika. Izay no itenenako hoe: raha vao miresaka fokonolona, mby ao an-tsaina ny dina. Ary raha ny amin’ny fitambaran’ny fokonolona mankany amin’ny firenena, dinam-piarahamonin’ny firenena izany.
Telo ny mifehy ny fiarahamonina: ny lalàna sy ny dina ary ny fady. Tsy misy sahy manao tsinontsinona na mipetraka eo ambonin’ny dina sy ny fady. Fa azo ipetrahana ny lalàna, na ny lalàmpanorenana aza. Raha misy lalàna hoe masina, raha izay no azo ilazana azy, ny lalàmpanorenana. Nefa io no voalohany tsy misy manaja. Mampalahelo, efa misy andrimpanjakana iray mba hanara-maso ny fanajana na fanosihosena ny lalàmpanorenana. Angaha izy manao an’izany?
* Mila hovaina ihany izany ny lalàmpanorenana?
– Manaiky aho, raha tsy ao ambadika ny kajikajy politika… Izay no itenenako hatrany hoe: atsangano ny antenimieram-panorenana miainga avy any amin’ny fokontany, fa tsy fifidianana andraisan’ny besinimaro anjara izay tsy mety amin’ny Malagasy. Taona vitsivitsy izay, any ambanivohitra be any Imerintsiatosika, Antananarivo, ohatra: mbola misy mieritreritra fa ny filoha Tsiranana no filoham-pirenena.
Ahoana no asaina mifidy ny olona nefa tsy fantany ny fiainam-pirenena? Raha miainga any amin’ny fokontany ny fifidianana, izay vao miakatra toy ny fifidianana loholona: hafa ny fandehany… Tsy mila famatsim-bola avy any ivelany izany, fa tsy mila biletà, ohatra. Mifankalala ny olona ao amin’ny fokontany, ka tsy sarotra ny fifidianana.
Manaraka, tsy misy kasikety na vary hanambazana olona, fa izay no anisan’ny manapotika ny fifidianana eto Madagasikara: fanararaotana ny fahantran’ny olona amin’ny fividianana ny safidiny. Izay ny antony ilàna ny fanovana ny lalàmpanorenana. Tokony hatao fari-pifidianana ny fokontany. Olona mamy hoditra sy fanta-bahoaka no voafidy miainga any ifotony, fa tsy izay be resaka sy be vola: mividy ny safidim-bahoaka; avy eo, manao ny ataony….